Appy achịcha ngw Nrụpụta: Onye ọrụ-Enyi na Enyi, Usoro Ọdịdị App Code | Martech Zone
Mmepe Ngwa bụ ụlọ ọrụ na-agbanwe agbanwe. Site na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-azọ maka ọnụnọ n'ịntanetị, ndị otu na-emepe ngwa na-arụ ọrụ maka ha. Enweela ịrị elu na-aga n'ihu na ngwa maka ngwa ndị mepụtara ahịa na-emetụta ndị mmepe dị adị. Na mgbakwunye, ọ bụ ụlọ ọrụ na-enwe nsogbu ịrị elu na ịrị elu na-achọ. E wezụga nke ahụ, ngwa ndị dị ugbu a chọrọ mmezi oge niile. Nnyocha na-egosi nke ahụ 65% nke akụrụngwa a na-eji anwa idebe ngwa ndị dịnụ maka azụmaahịa.
Ndị otu nwere ike ịlanarị nke a ruo ugbu a, mana ịrị elu ọnụ ahịa yana itinye ego na itinye ego na ngwa ha chọrọ iji gosipụta ọdịnihu nke ụlọ ọrụ a. Ọ bụ ihe dị adị na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-agbagọ mmepe AGILE yana ọkwa ọghọm dịgasị iche. Agbanyeghị, enwere teknụzụ ọhụụ na - enye ndị otu ohere ịga n’ihu n’ahịa ahụ, mejuputa AGILE, belata ọnụ ahịa ma bulie ọnụọgụ. Ọ bụ mba-koodu ngwa mmepe.
Mba-koodu bụ ọdịnihu nke mmepe ngwa. Ọ bụ ezie na nzuzo bụ ụlọ ọrụ nke ga-adị mgbe niile, ọ nweghị koodu edere maka ndị otu iji belata usoro nke ngwa ngwa. Dị ka a nnyocha a na-adịbeghị anya, 40% nke otu enweela koodu ọ bụla ma ọ bụ na-akwado ime ya n'afọ na-abịanụ.
Appy Pie App Builder Ngwọta Nlekọta
Appy Pie na-enye ngwangwa ngwungwu ụlọ ọrụ maka ndị otu na ndị mmadụ. Onye nwe ya na-ewu ngwa bụ otu n'ime sọftụwia kacha mma na-eme ngwa ahịa na ahịa taa. Amara maka njirimara enyi ya, onye na-ewu ngwa nwere ike inyere gị aka ịme ngwa na nkeji ole na ole. Appy Pie na-enye gị ohere ịmepụta ngwa gam akporo, iPhone na PWA maka ndị ahịa gị. N'ime ihe karịrị 200 latent atụmatụ, ngwa ngwa adịbeghị mfe ma ọ bụ karịa ọsọ.
Appy achịcha App Builder dị obere karịa afọ 5. N'ime afọ 5 ndị ​​a, ha ahapụla ndị mmadụ na azụmaahịa ka ha mee ọtụtụ nde ngwa. Kụziri site ọkachamara mmepe, software nwere kpam kpam codeless interface nke budata egbutu mmepe oge. Ọzọkwa, ọ na-ebelata usoro nke ịnọgide na-enwe na-emelite ngwa dị nnọọ ole na ole clicks. Site na Appy Pie, ị nwere ike ịme ngwa dị iche iche dịka ngwa ngwa mmekọrịta mmekọrịta, ngwa ahịa, ngwa nkwado ndị ahịa, ngwa AR / VR, ngwa ngwa ala wdg.
Site na ngwa Appy achịcha dị mfe ma na-enweghị nghọta, enwere ike ịme ngwa ngwa karịa ma dị mfe.
Ihe na - edozi Appy Pie App Builder:
Clean dashboard imewe ahaziri maka mfe igodo.
N'ime njirimara 200 dịka ọkwa ọkwa, ikike VR, njikọta mmekọrịta na mmekọrịta na akparịta ụka
Nkwado mbipụta aka na-akwado ụlọ ahịa ngwa. Ezigbo ihe eji enyere ndị ahịa aka pụtara na Appy Pie na-enyere gị aka.
Achịcha Appy dị na mpịakọta yana sọftụwia ya, na-ekepụta ọhụụ, ngwaahịa dị mma kwa ụbọchị. Ha malitere na odi mfe iji onye na-ewu koodu ulo oru ma tinye ihe omuma di otua iji meputa ndi na-ewu ulo na ebe nrụọrụ weebụ, nkata na ihe omuma ngwanrọ. Appy Pie ugbu a enweghị atụmatụ iji mebie ụlọ ọrụ IT yana onye na-ewu ngwa na-enweghị koodu ma na-achọ ijikọ sistemụ ihe nketa iji hụ na ụlọ ọrụ mmepe ngwa na-etolite ọnụ.
Ezi koodu na-enweghị ike ịdị ezigbo anya, mana Appy Pie haziri sọftụwia nke nwere ike ilekọta ihe niile dị mfe na mmepe ngwa, na-enyere ndị otu nọ ebe niile aka ịlaghachi azụ ha ma mepụta ngwa ndị ruru eru na obere mbọ. Ọ bụ ezigbo ngwugwu nke ngwa ngwa ngwa bụ eziokwu na ọ na-eme ka mmezi achọrọ maka ngwa. Site na onye wuru ngwa ahụ, mmelite chọrọ ole na ole clicks na-enye ndị otu ohere itinye uche na mbọ ha n'ịchọpụta ihe na ịchekwa ihe dị mkpa iji zute ụlọ ọrụ na-arị elu.
Mepụta ngwa na Appy Pie
Ingmepụta ngwa na ngwa ngwa dị mfe karịa ka ị chere. Ọ bụ usoro usoro 3 dị mfe.
Register - Banye na Appy achịcha. Na ntaneti gị, n'okpuru taabụ taabụ, họta ndebiri maka ngwa gị. Appy achịcha na-enye ọtụtụ narị ndebiri ịhọrọ site na. Dezie ndebiri gị ma họrọ agba, mkpụrụ edemede na nhazi. Bulite akara ngosi gị.
Hazie - The nzọụkwụ ọzọ na-agụnye na-agbakwunye atụmatụ gị ngwa. Na njirimara taabụ, ị nwere ike ịchọ atụmatụ wee pịa otu atụmatụ iji tinye ya na ngwa gị. Can nwere ike hazie atụmatụ ọ bụla iji kwado nzube gị n'ụzọ kachasị mma. Enwere ike ịmepụta ọtụtụ nde ụdị ngwa site na ịhazi nke dị na dashboard ngwa ngwa.
ule - Ozugbo i biri na imepụta na atụmatụ gị, nwalee ngwa gị na ngwaọrụ ma afọ ojuju, bipụta ya na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Storelọ Ahịa Play, ma ọ bụ ha abụọ.
Nke a bụ ihe ị ga - eme iji mepụta ngwa na Appy Pie. Mmepe ngwa na-agbanwe. Enweghị koodu ọ bụla bụ usoro a na-apụghị izere ezere nke mmalite. Appy Pie na-enye ohere maka azụmaahịa niile na-aga n'ihu. Nkuchi na-arịwanye elu nke enweghị koodu na mmepe ngwa ngwa nke ikpo okwu na-eme ka onye ọ bụla nwee ọdịnihu dị mma.
Jikọọ na koodu enweghị koodu taa! Nye onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'ụlọ, nọrọ na nche!
Banye maka Appy achịcha
Tags: achịchangwa ahiaahịa ngwa ọdịnalaenweghị kooduọ dịghị-koodu ngwa na-ewungwa ngwa mgbasa ozi